Ethernet Chinja Vagadziri & Vatengesi | China Ethernet Chinja Fekitori
8 Port 1000Mbps Ethernet kuna 2 Fiber Chinja Model ZJ-1000228-S20
8 Port 1000Mbps Ethernet kune 2 Fiber Chinja ndeye 1000BASE-FX Ethernet mhangura midhiya ku1000Base-TX Fiber. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Fiber Chinja hutachiwana chinhambwe kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega. Zvichemo
8 Port 1000Mbps Ethernet kuna 1 Fiber Chinja Model ZJ-1000208-S20
8 Port 1000Mbps Ethernet kune Fiber Chinja ndeye 1000BASE-FX Ethernet mhangura midhiya ku1000Base-TX Fiber. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Fiber Chinja hutachiwana chinhambwe kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega. Zvimiro • 8 Port 100 / 1000M Ethernet + 1 Port Fiber Chinja, SC • Hafu kana yakazara duplex auto-kutaurirana • 100 / 1000Mbps auto-kutaurirana kwechiteshi chendarira • Auto MDI / M ...
2 Port 1000Mbps Ethernet kuna Fiber Chinja ZJ-1000204-S20
2 Port 1000Mbps Ethernet kune Fiber Chinja ndeye 1000BASE-FX Ethernet mhangura midhiya ku1000Base-TX Fiber. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Fiber Chinja hutachiwana chinhambwe kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega. Zvimiro • 4 Port 100 / 1000M Ethernet + 2 Port Fiber Chinja, SC • Hafu kana yakazara duplex auto-kutaurirana • 100 / 1000Mbps auto-kutaurirana kwechiteshi chendarira • Auto MDI / M ...
2 Zviteshi 100 / 1000Mbps Ethernet Fiber Chinja Model ZJ-1000102-25
2 Zviteshi 100 / 1000Mbps Ethernet Fiber Chinja ndeye 1000BASE-FX Ethernet mhangura midhiya ku1000Base-TX Fiber. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Fiber Chinja hutachiwana chinhambwe kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega. Zvimiro • 2 Port 100 / 1000M Ethernet + 1 Port Fiber switch, Imwe Mode Dual Fibre • Hafu kana yakazara duplex auto-kutaurirana • 100/1000 Mbps auto-kutaurirana kwe ...
MINI 4 Port 10 / 100M ACIVE POE Chinja- (4 + 2) X1006B
Chigadzirwa Chinogadzikika Iyo PoE switch inopa simba uye data kubva kune imwechete poindi, uchishandisa Simba pamusoro peEthernet (PoE) pamusoro peimwe Cat-5 tambo. Inogona kushandiswa kune chero gumi / 100Mbps yekubatanidza uye yekupa indasitiri-yakajairwa IEEE 802.3af simba. Yepamberi auto-yekuona algorithm inopa simba kune 802.3af ekupedzisira zvishandiso, Pamusoro pezvo, iyo PoE switch inozvisarudzira yega PoE zvinodiwa, kumhanya, duplex, uye tambo mhando uchishandisa Auto Uplink. Nyore kushandisa uye hwakavimbika. Iyo PoE switch inokodzera kumisikidza PoE zvishandiso zvakadai ...
Unyanzvi Hwakananga Chigadzirwa Zita 10/100 / 1000M PoE Splitter Cable Chigadzirwa Model 4812GB Simba Rerudzi Rwenyika 1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-) magetsi PoE Voltage Input 44-57V DC Voltage Kuburitsa 12V DC Kubuda Kwazvino 1.25A (MAX) Chinongedzo 1x RJ45 yekuisa chiteshi 1x RJ45 kuburitsa chiteshi 1x DC kuburitsa chiteshi Network Medium Cat5 ( UTP) kana zvimwe Protocol IEEE 802.3 ini 10 BASE-T IEEE 802.3 u 100 BASE-TX IEEE 802.3 x Kuyerera Kudzora IEEE 802.3 af Simba pamusoro peEthernet Rate 10/100 / 1000M ...
10 / 100M Isolated PoE mahwanda Cable 4812G
Unyanzvi Mucherechedzo Chigadzirwa Zita 10 / 100M PoE Splitter Cable Chigadzirwa Model 4812G Simba Rokupa Rudzi 1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-) magetsi magetsi PoE Voltage Input 44- 57V DC Voltage Kubuditsa 12V DC Yazvino Kuburitsa 1.25A (MAX) Chinongedzo 1x RJ45 yekuisa chiteshi 1x RJ45 kuburitsa chiteshi 1x DC kuburitsa chiteshi Network Medium Cat5 (UTP) kana zvimwe Protocol IEEE 802.3 i 10 BASE-T IEEE 802.3 u 100 BASE-TX IEEE 802.3 x Kuyerera Kudzora IEEE 802.3 af Simba pamusoro peEthernet Rate 10 / 100M Mamiriro eUS P ...
24 Port 10/100 / 1000M POE Chinja- (24 + 4) 2422GB (Tsigira 1U Standard rack)
Iyo PoE switch inopa simba uye data kubva kune imwechete poindi, uchishandisa Simba pamusoro peEthernet (PoE) pamusoro peimwe Cat-5 tambo. Inogona kushandiswa kune chero gumi / 100 / 1000Mbps yekubatanidza uye yekupa indasitiri-yakajairwa IEEE 802.3af simba. Yepamberi auto-yekuona algorithm inopa simba kune 802.3af ekupedzisira zvishandiso, Pamusoro pezvo, iyo PoE switch inozvisarudzira yega PoE zvinodiwa, kumhanya, duplex, uye tambo mhando uchishandisa Auto Uplink. Nyore kushandisa uye hwakavimbika. Iyo PoE switch inokodzera kumisikidza PoE zvishandiso senge IP kamera ...
24 Port GIGABIT ANOSHANDA POE Chinja- (24 + 2) 2420GB (Desktop Rudzi)
16 Port GIGABIT CHINOKOSHA POE Chinja- (16 + 3) X1621GB (Desktop)
Iyo PoE switch inopa simba uye data kubva kune imwechete poindi, uchishandisa Simba pamusoro peEthernet (PoE) pamusoro peimwe Cat-5 tambo. Inogona kushandiswa kune chero gumi / 100Mbps yekubatanidza uye yekupa indasitiri-yakajairwa IEEE 802.3af simba. Yepamberi auto-yekuona algorithm inopa simba kune 802.3af ekupedzisira zvishandiso, Pamusoro pezvo, iyo PoE switch inozvisarudzira yega PoE zvinodiwa, kumhanya, duplex, uye tambo mhando uchishandisa Auto Uplink. Nyore kushandisa uye hwakavimbika. Iyo PoE switch inokodzera kumisikidza PoE zvishandiso senge IP kamera, WLA ...
16 Port GIGABIT CHINOKOSHA POE Chinja- (16 + 3) 1621GB (Tsigira 1U Standard rack)
12 Port 10 / 100M ANOITA POE Chinja- (10 + 2) 1012B